महामारीमा चाडपर्व मनाउन घर जाँदा आफैँलाई नै डर हुन्छ,तैपनि दसैँ मनाउन जाँदैछु | Hamro Doctor News
मंगलबार, ४ माघ २०७८ /
काेराेना फैलिएपछि सर्वोच्चको सेवामा कटौती
देशभर २२ हजार बढी कोरोना परीक्षण गर्दा १० हजार २ सय ५८ संक्रमित थपिए
कोरोना संक्रमण बढेपछि उपत्यकामा नयाँ आदेश जारी
मापदण्ड नमाने लाइसेन्स नदिने नेपाल पशुचिकित्सा परिषद्को चेतावनी
भारतमा एकैदिन थपिए दुई लाख ३८ हजार संक्रमित
महामारीमा चाडपर्व मनाउन घर जाँदा आफैँलाई नै डर हुन्छ,तैपनि दसैँ मनाउन जाँदैछु
By अञ्जली श्रेष्ठ
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण चाडपर्व पहिलेको जस्तो रमाइलो हुन छोडेको छ । दुई वर्ष भयो कोरोना महामारीका कारण दसैँमा खासै रमाइलो गर्न पाइएको छैन । जसकारण, घरपरिवारसँग भेटघाट बन्द भयो । तर, यो वर्ष भने केही सहज होलाकी जस्तो छ ।
गतवर्षको दसैँमा बिदा थिएन । अस्पतालमा नै दसैँ मनाइयो । यो वर्षको दसैँमा भने घर जादैछु । एक हप्ताको बिदा छ परिवारहरूसँग बसेर मनाउने योजनामा छु ।
गतवर्षको दसैँंमा क्वारेन्टाइन बसेर अस्पतालमा काम गरेका थियौं । क्वारेन्टाइनमा रहँदा पनि साथीभाईसँग त्यस्तो रमाइलो गर्न पाएका थिएनौं । कोरोना महामारीको त्रास थियो । क्वारेन्टाइनभित्र नै एक अर्कामा कोरोना सर्छ कि भन्ने डर पनि थयो । त्यसैले एक्लै बसेर दसैँं बिताएका थियौं ।
अन्य समयमा एक्लै बस्दा त एक्लोपनको महसुस हुन्छ । झन दसैँको बेलामा एक्लै बस्दा नरमाइलो लाग्थ्यो । क्वारेन्टाइनमा बस्दा अस्पतालको साधा खाना,एक्लै कोठामा बस्नुपर्दा,अनि परिवारबाट टाढा हुँदा एक्लोपनको महसुस हुन्थ्यो ।
कोरोना महामारीको समयमा परिवारका सदस्य पनि डराएका थिए । कतिले काम नगर,छोड भन्ने खालको सल्लाह पनि दिएका थिए । तर,अब त्यस्तो महामारीको समयमा कसरी काम छोड्ने । त्यसैले निरन्तर काम नै गरे मैले ।
कोरोनाको समयमा मात्र होइन अन्य समयमा पनि पालोपालो गरेर हामी दसैँतिहार मनाउन जाने गर्दथ्यौं । तर कोरोना महामारीमा आफैलाई पनि घर जाँदा डर हुने,परिवारका अन्य सदस्यलाई कोरोना सर्छ कि जस्तो लाग्ने भएर पनि गएनौं ।
चाडपर्वमा घर नजाँदा नमज्जा लाग्ने गर्दछ । तर,आफ्नो पेशा नै यस्तो छ । अहिले कोरोनाको जोखिम पनि धेरै छ । आफ्नो आमाबुबाले त आइज भन्नु हुन्छ तर आफन्तहरुले हामिलाई देख्दा कोरोनामा काम गर्ने कतै हामिलाई सर्ने त होइन भन्ने खालको भाव झल्काउनु हुन्छ । त्यसैले गइहाल्न पनि मन लाग्दैन ।
दसैँंको बेलामा अस्पतामा कति बिरामीहरूको कुरुवा हुँदैनन्,बसेका कुरुवाहरूको पनि मुहार न्याउरो हुन्छ । त्यस्तो बेलामा बिरामीको सेवागर्दा तपाईहरुले यस्तो बेलामा पनि हाम्रो सेवा गर्नु भएको छ भन्छन् । प्राय बिरामीहरू सकारात्मक नै हुन्छन् । चाडपर्वहरूमा हामी अस्पतालमा हुँदा बिरामीहरूसँग नै मनाउने गर्दछौ ।
परिवारसँग चाडपर्व मनाउन नपाउदा कहिलेकाहीँ नराम्रो लाग्छ । तर चाडपर्व मनाउन नपाएनि मैले बिरामीहरूको सेवा गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ । तर कहिलेकाहि अरुले चाडपर्वहरु मनाइरहँदा र आफुले मनाउन नपाउदा चै मैले परिवारलाई समय नै दिन सकिन कि भन्ने लाग्छ ।
अस्पतालका बिरामीहरु राम्रो भएर घर फर्केको देख्दाहामिले गर्दा यतिको सहयोग भाको छ,उहाँ बाच्नु भएको छ भनेर खुशी लाग्छ । अन्य समयमा राम्रो काम गरेको छु भन्ने लाग्छ । चाडपर्वमा जाननपाउदा कहिलेकाहि नरमाइलो लाग्छ ।
गतवर्ष देशैभरी दसैँं तिहारमा त्यस्तो रमाइलो गरेर मनाउन सकेनौ । यो वर्ष कतिले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छौ । तर पनि कतिखेर कोरोना लाग्छ भन्ने थाहाँ हुदैन त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर मनाउनुहोला ।
(श्रेष्ठ केन्द्रिय कोभिड युनिफाइड अस्पतालको नर्स हुन)
Last modified on 2021-10-13 16:52:27
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ र कोरोना भाइरस
२१ वर्षदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रुपमा कार्यरत एकलक्ष्मी भन्छिन् : सकुञ्जेल सेवा गर्छु
बिरामी भर्ना गर्न कोभिड परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य
'क्यान्सर हुँदा भेट्न आउनेसाथीहरू रुन्थे, तर म उनीहरूलाई सम्झाउँथें'
कोरोनाको उच्च जोखिममा चितवन, एकसातामै ६ सय २६ प्रतिशतले संक्रमित थपिए
के हो कलेजोमा बाेसाे जम्ने समस्या ? जानौं
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै– ‘अति आवश्यक परेमात्र अस्पताल आउन आग्रह’
नवजात शिशुको ख्याल गर्दा के के कुरामा ध्यान दिने ? यसो भन्छिन् डा. कंसाकार